आइतबार नोभेम्बर 28, 2021 |
आइतबार नोभेम्बर 28, 2021
विषय — पुरातन र आधुनिक नेक्रोमेन्सी, एलियास मेस्मेरिज्म र सम्मोहन, अस्वीकार गरियो
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी 13 : 1
“"अहिले शासन गर्नेहरू परमेश्वरबाट नियुक्त गरिएका हुन्।"”
उत्तरदायी पढाइ: प्रस्थान 20 : 1-6
2 म परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट बाहिर ल्याएँ जहाँ तिमीहरू कमारा-कमारीहरू थियौ।
3 तिमीहरूले मबाहेक अरू कुनै देवता पूज्नु हुँदैन।
4 तिमीहरूले कुनै मूर्ति बनाउनु हुँदैन। कुनै प्रकारको मूर्ति अथवा नक्सा नबनाऊ जो आकाशमा अथवा तल पृथ्वीमाथि, पृथ्वी मुनि पानीमा छ।
1. व्यवस्था 28 : 1-3, 6, 7, 14
1 अब यदि तिमीहरू आज मैले बताएको परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्न होशियार भयौ भने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिमीहरूको राष्ट्रलाई पृथ्वीका अन्य सबै राष्ट्रहरू भन्दामाथि राख्नु हुँनेछ।
3 शहरमा र गाउँ-बस्तीमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिनु हुनेछ।
7 तिमीहरूसित लडाईं गर्न आउने शत्रुहरूलाई पराजित गाराउन परमप्रभुले तिमीहरूलाई सहायता गर्नु हुनेछ। शत्रुहरू तिमीहरूसित लडाईं गर्नु एउटै बाटो भएर आउनेछन् तर तिनीहरू सातवटा बाटा भएर भाग्नेछन्।
2. यशैया 8: 19 (लाई 1st?)
19 कतिपय मानिसहरू भन्छन्, भूतप्रेत खेलाउने अनि जादूगरहरूलाई के गर्नु पर्ने? ती भूतप्रेत खेलाउने र जादूगरहरूले कानेखुसी गरी उनीहरूले मात्र मानिसहरू समक्ष गुप्त कुराहरू जानेको भन्लान्। तर म तिमीलाई भन्छु कि मानिसहरूले परमप्रभुको आज्ञा माग्नु नै पर्छ!
3. 1 शमूएल 28: 3-8, 11-13 (लाई:), 14 (र शाऊल)-18 (लाई 1st,)
7 अन्त्यमा शाऊलले आफ्ना अधिकारीहरूलाई भने, मलाई एउटी तंत्र-मंत्र गर्ने महिला ल्याइदेऊ, म त्यसलाई सोध्छु यो युद्धको फल के हुन्छ।”तिनका अधिकारीहरूले जवाफ दिए, एन्दोरमा त्यस्ती एउटी स्त्री छे।
8 शाऊलले भेष बद्लाउनको निम्ति भिन्नै लुगा लगाए यसकारण उसलाई नचिनोसू। त्यो रात शाऊल दुइजना मानिस लिएर त्यस स्त्रीलाई भेट्न गए। शाऊलले त्यस स्त्रीलाई भने, म तिमीलाई भन्नेछु मेरो भविष्य बताउने आत्मा बोलाऊ। म जसको नाउँ दिन्छु त्यसैको आत्मा जगाउनु।
11 स्त्रीले सोधी, तिमीले कसलाई बोलाउनु लाउँछौ? शाऊलले भने, शमूएलको आत्मालाई बोलाऊ।
12 शमूएलको आत्मा तिनको अघि देखा पर्यो। शमूएललाई देखेर त्यो स्त्रीले जोडले चिच्याई। तिनले शाऊललाई भनिन्, मलाई धोखा दिनुभयो! तपाईं नै शाऊल हुनुहुन्छ।
13 राजाले स्त्रीलाई भने, नडराऊ। तिमीले के देख्यौ? स्त्रीले भनी, मैले आत्मा भुइँबाट निस्किएको देखे।
14 शाऊलले सोधे, को जस्तो देखिन्छ? स्त्रीले जवाफ दिइ, खास किसिमको लबेदा ओढेको एउटा वृद्ध मानिस जस्तो देखिन्छ।”त्यसपछि शाऊलले थाहा पाए शमूएल नै हो भनेर। शाऊलले भूइँतिर शिर झुकाए उसलाई अभिवादन गरे।
15 शमूएलले शाऊललाई भने, मलाई किन दुखः दिएको? मलाई किन बोलाएको? शाऊलले भने, म संकटमा छु। पलिश्तीहरू म सँग युद्ध गर्न आउँदैछन्, अब परमेश्वर मसित हुनु हुन्न। परमेश्वरले मलाई केही दिनुहुन्न। न त उहाँले कुनै अगमवक्ता न सपनामा केही भन्नु हुन्छ। यसकारण तपाईंलाई बोलाएको छु मलाई भन्नुहोस् म के गरौ?
16 शमूएलले भने, परमप्रभु तिमीसित हुनुहुन्न। उहाँ तिम्रो छिमेकी दाऊदसँग हुनुहुन्छ। यसकारण मलाई किन झन्झट दिएको?
18 तिमीले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ।
4. लूका4: 14 (लाई आत्मा)
14 येशू पवित्र आत्माको शक्ति लिएर फर्कूनु भयो...।
5. लूका 8 : 27 (र) मात्र, 27 (त्यहाँ)-35
28 त्यसलाई भूतले धेरै पटक समातको थियो। त्यसलाई जेलमा राखियो अनि हात खुट्टाहरू साँङ्गलोले बाँधियो। तर त्यस मानिले सँधैं साँङ्गलाहरू चुडाउँथ्यो, अनि उसलाई भुत्‌ले एकान्त ठाँउतिर खेदथ्यो।
29 तर येशूले त्यस मानिसबाट त्यो भूत-आत्मालाई बाहिर निस्किने आज्ञा दिनुभयो। त्यो मानिस येशूको अघाडी घोप्टेर ठुलो स्वरले चिच्यायो, हे, सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, मबाट तपाईं के चाहनुहुन्छ? दया गरी मलाई यातना नदिनुहोस्।
30 येशूले त्यसलाई सोध्नु भयो, तिम्रो नाम के हो? त्योस मानिसले जवाफ दियो, लेजिअन। त्यसले लेजिअन भन्यो किनभने धेरै भूतहरू ऊ भित्र पसेका छन्।
7. लूका 21 : 8
8 येशूले भन्नुभयो, सर्तक बस! मूर्ख नबन। मेरो नाम लिदै धेरै मानिसहरू आउनेछन्। तिनीहरूले भन्नेछन्, म नै ख्रीष्ट हुँ, अनि, सही समय आएको छ! तर तिनीहरूलाई नपछयाउनु।
8. यूहन्ना 10 : 14, 27, 28 (अनि तिनीहरु)
14 म त्यो गोठालो हुँ जसले भेडालाई। म मेरा भेडाहरू। अनि भेडाले पनि मलाई चिन्दछ।
28 ...तिनीहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्। अनि कसैले पनि तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लान सक्तैन।
1. 497 : 5-8 (हामी)
हामी एक सर्वोच्च र असीम ईश्वरलाई स्वीकार र पूजा गर्छौं। हामी उहाँको पुत्र, एक ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छौं; पवित्र आत्मा वा ईश्वरीय आरामदायी; र परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा मानिस।
ईश्वरीय मनले मानिसको सम्पूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह र शक्तिको माग गर्दछ। कुनै पनि कम वफादारीको लागि कुनै आरक्षण गरिएको छैन।
परमेश्वरको अज्ञानता अब विश्वासको लागि पाइलाको ढुङ्गा होइन। आज्ञाकारिताको एउटै ग्यारेन्टी भनेको उहाँको सही आशंका हो जसलाई सही जान्नको लागि अनन्त जीवन हो।
हाम्रो प्रगति पत्ता लगाउन, हामीले हाम्रो स्नेह कहाँ राखिएको छ र हामी कसलाई परमेश्वरको रूपमा स्वीकार गर्छौं र पालन गर्छौं भनेर सिक्नुपर्छ। यदि ईश्वरीय प्रेम हाम्रो लागि नजिक, प्रिय र अधिक वास्तविक हुँदै गइरहेको छ भने, पदार्थ तब आत्माको अधीनमा छ। हामीले पछ्याउने वस्तुहरू र हामीले प्रकट गर्ने भावनाले हाम्रो दृष्टिकोण प्रकट गर्दछ, र हामीले के जित्दैछौं भनेर देखाउँदछ।
येशूले प्रदर्शनद्वारा जीवनको मार्ग सिकाउनुभयो, कि हामीले यो ईश्वरीय सिद्धान्तले बिरामीहरूलाई कसरी निको पार्छ, त्रुटिलाई बाहिर निकाल्छ र मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्छ भनेर बुझ्न सक्छौं। …परमेश्‍वरप्रतिको आफ्नो आज्ञाकारिताद्वारा, उहाँले अरू सबैभन्दा बढी आत्मिक रूपमा अस्तित्वको सिद्धान्त देखाउनुभयो।
परमेश्वरमा हाम्रो विश्वासको हरेक परीक्षणले हामीलाई बलियो बनाउँछ। भौतिक अवस्थालाई आत्माद्वारा पार गर्न जति कठिन देखिन्छ, त्यति नै बलियो हाम्रो विश्वास र हाम्रो प्रेम शुद्ध हुनुपर्छ। प्रेरित यूहन्ना भन्छन्: "प्रेममा कुनै डर छैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ ... डराउने मानिस प्रेममा सिद्ध हुँदैन।" यहाँ क्रिश्चियन विज्ञान को एक निश्चित र प्रेरित घोषणा छ।
7. 102 : 30-32 (लाई ,)
मानिसजातिले सिक्नुपर्छ कि दुष्ट शक्ति होइन। यसको तथाकथित निरंकुशता भनेको शून्यताको चरण मात्र हो। क्रिश्चियन विज्ञानले दुष्टको राज्यलाई नष्ट गर्छ,
8. 103 : 18-23 (लाई 2nd .), 29-2
क्रिस्चियन विज्ञानमा नाम दिए अनुसार, पशु चुम्बकत्व वा सम्मोहन भनेको त्रुटि, वा नश्वर दिमागको लागि विशिष्ट शब्द हो। यो गलत विश्वास हो कि मन पदार्थ मा छ, र दुबै खराब र राम्रो छ; त्यो खराबी असल जत्तिकै वास्तविक र शक्तिशाली छ। यो विश्वासमा सत्यको एउटा गुण छैन। यो या त अज्ञानी वा दुर्भावनापूर्ण छ।
वास्तवमा त्यहाँ कुनै नश्वर दिमाग छैन, र फलस्वरूप नश्वर विचार र इच्छाशक्तिको कुनै स्थानान्तरण छैन। जीवन र अस्तित्व ईश्वरको हो। क्रिश्चियन विज्ञानमा, मानिसले कुनै हानि गर्न सक्दैन, किनकि वैज्ञानिक विचारहरू साँचो विचारहरू हुन्, परमेश्वरबाट मानिसमा जाने।
वास्तविक मानिसको हरेक कार्य दिव्य मनद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। मानव दिमागमा मार्न वा निको पार्ने कुनै शक्ति छैन, र परमेश्वरको मानिसमाथि यसको कुनै नियन्त्रण छैन। ईश्वरीय मन जसले मानिसलाई बनायो उसको आफ्नै छवि र समानता कायम राख्छ। सेन्ट पावलले घोषणा गरेझैं मानव दिमाग परमेश्वरको विरुद्धमा छ र यसलाई त्याग्नु पर्छ। वास्तवमा अवस्थित सबै ईश्वरीय मन र यसको विचार हो, र यस मनमा सम्पूर्ण अस्तित्व सामंजस्यपूर्ण र शाश्वत पाइन्छ। सीधा र साँघुरो बाटो भनेको यो तथ्यलाई हेर्नु र स्वीकार गर्नु हो, यो शक्तिको उपज होस्, र सत्यको नेतृत्वलाई पछ्याउनुहोस्।
यदि पशु चुम्बकत्वले रोगलाई कम गर्न वा निको पार्ने देखिन्छ भने, यो उपस्थिति भ्रामक छ, किनकि त्रुटिले त्रुटिको प्रभावलाई हटाउन सक्दैन। त्रुटि अन्तर्गत असुविधा सान्त्वना भन्दा राम्रो छ। कुनै पनि उदाहरणमा जनावरको चुम्बकत्वको प्रभाव छैन, हालसालै सम्मोहन भनिन्छ, भ्रमको प्रभाव बाहेक। यसबाट व्युत्पन्न कुनै पनि देखिने लाभ गूढ जादूमा विश्वासको समानुपातिक हो।
पशु चुम्बकत्वको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन, किनकि परमेश्वरले वास्तविक, सामंजस्यपूर्ण, र अनन्त सबैलाई शासन गर्नुहुन्छ, र उहाँको शक्ति न पशु वा मानव हो। यसको आधार एक विश्वास र यो विश्वास जनावर हो, विज्ञान पशु चुम्बकत्व, वा सम्मोहन केवल एक निषेध हो, न त बुद्धि, शक्ति, न वास्तविकता, र अर्थमा यो तथाकथित नश्वर दिमाग को एक अवास्तविक अवधारणा हो।
पशु चुम्बकत्वको हल्का रूपहरू हराउँदैछन्, र यसको आक्रामक विशेषताहरू अगाडि आउँदैछन्। नश्वर विचारको अन्धकारमा लुकेका अपराधका तानहरू, हरेक घण्टा जालहरू थप जटिल र सूक्ष्म छन्। पशु चुम्बकत्वको वर्तमान विधिहरू यति गोप्य छन् कि तिनीहरूले उमेरलाई आलस्यमा फसाउँछन्, र अपराधीले चाहेको विषयमा धेरै उदासीनता उत्पन्न गर्छन्।
अन्धविश्वास र समझलाई कहिल्यै जोड्न सक्दैन। जब क्रिस्चियन विज्ञानको अन्तिम भौतिक र नैतिक प्रभावहरू पूर्ण रूपमा समातिन्छ, सत्य र त्रुटि, बुझाइ र विश्वास, विज्ञान र भौतिक भावना, अगमवक्ताहरूद्वारा पूर्वचित्रित र येशूद्वारा उद्घाटन गरिएको बीचको द्वन्द्व समाप्त हुनेछ, र आध्यात्मिक सद्भावको शासन हुनेछ।
"तिमी केही कुराहरूमा वफादार भयौ, म तिमीलाई धेरैमाथि शासक बनाउनेछु" भन्ने शास्त्र शाब्दिक रूपमा पूरा हुन्छ, जब हामी सत्यको सर्वोच्चताप्रति सचेत हुन्छौं, जसबाट त्रुटिको शून्यता देखिँदैन; र हामीलाई थाहा छ कि त्रुटिको शून्यता यसको दुष्टताको अनुपातमा हुन्छ। जसले ख्रीष्टको लुगाको हेम छुन्छ र आफ्नो नश्वर विश्वास, पशुत्व, र घृणालाई मास्टर गर्छ, निको पार्ने प्रमाणमा रमाउँछ, - एक मीठो र निश्चित अर्थमा कि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ।
एउटै पापमाथि विजयको लागि, हामी धन्यवाद दिन्छौं र सेनाहरूका प्रभुलाई महिमा दिन्छौं। सबै पापमाथिको शक्तिशाली विजयको बारेमा हामी के भनौं? एउटा चर्को गीत, पहिले भन्दा धेरै मीठो, उच्च स्वर्गमा पुग्यो, अब स्पष्ट र ख्रीष्टको महान हृदयको नजिक उठ्छ; किनभने आरोप लगाउने त्यहाँ छैन, र प्रेमले उनको आदिम र अनन्त तनाव पठाउँछ।